Adopt Me – Page2– Petunity
Adopt Me Xx သားသားနာမည် Mocha လို့ခေါ်ပါတယ်။ သားသားအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။ အသက် ၁ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ရန်ကုန်ကပါ။ အိမ်ချက်အစားအစာနဲ့ ဟင်းရွက်တွေ ကြိုက်ပါတယ်။ အစားအစာ ဂျီးမများပါဘူး။ အကြိုက်ဆုံးက အမဲသားနဲ့ ကြက်သားပါ။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ အသက်7လသားအရွယ်တွင် GI ယားယံခြင်းနှင့် ချိတ်သန်ကောင်ပေါက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ဖူးသည့် ရာဇဝင်ရှိပြီး...
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်က ကြောင်လေး ၉ ကောင်မှာ နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ကြောင်လေးကတော့ "ငဝါ" ဖြစ်ပါတယ်။ သားသား "ငဝါ" ကတော့ Adopt Me မှာ စာရင်းပေးပြီး မကြာခင်မှာ ဆုံးသွားတယ် သိရပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာမှာ ပျော်နေပါစေ သားသား ငဝါရေ။ သားသား "ငဝါ" ရဲ့ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သားသားပုံတွေကတော့ ပက်ယူနတီရဲ့...
Adopt Me Xx အသက် ၅ လအရွယ် ကြောင်မလေး "ရွှေမိ" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "ရွှေမိ" ကတော့ အရင်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး "ခေါင်းကြီး၊ အလတ်မ၊ မိအေးတယော၊ မိအေး" ကြောင်ထီးလေး "ငကြား၊ အာကြီး" တို့နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "ရွှေမိ" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ...
Adopt Me Xx အသက် ၅ လအရွယ် ကြောင်ထီးလေး "အာကြီး" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "အာကြီး" ကတော့ အရင်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး "ခေါင်းကြီး၊ အလတ်မ၊ မိအေးတယော၊ မိအေး၊ အငယ်ကောင်" ကြောင်ထီးလေး "ငကြား" တို့နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "အာကြီး" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ...
A Nge Kaung
Adopt Me Xx အသက် ၁၄ လအရွယ် ကြောင်မလေး "အငယ်ကောင်" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "အငယ်ကောင်း" ကတော့ အရင်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး "ခေါင်းကြီး၊ အလတ်မ၊ မိအေးတယော၊ မိအေး" ကြောင်ထီးလေး "ငကြား" တို့နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "အငယ်ကောင်" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ cb...
Adopt Me Xx အသက် ၉ လအရွယ် ကြောင်မလေး "မိအေး" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "မိအေး" ကတော့ အရင်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး ခေါင်းကြီး၊ အလတ်မ၊ မိအေးတယော၊ ကြောင်ထီးလေး "ငကြား" တို့နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "မိအေး" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ cb...
Mi Aye Ta Yaw
Adopt Me Xx အသက် ၇ လအရွယ် ကြောင်မလေး "မိအေးတယော" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "မိအေးတယော" ကတော့ အရင်အပတ်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး ခေါင်းကြီး၊ အလတ်မ ကြောင်ထီးလေး "ငကြား" တို့နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "မိအေးတယော" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ cb ကိုလာခဲ့ပါနော်။...
A Latt Ma
Adopt Me Xx အသက် ၉ လအရွယ် ကြောင်မလေး "အလတ်မ" နေစရာမရှိလို့ အမှန်တကယ်် ချစ်ခင်မွေးစား တာဝန်ယူမယ့်သူကို ရှာနေပါတယ်။ "အလတ်မ" ကတော့ အရင်အပတ်ကတင်ထားတဲ့ ကြောင်မလေး ခေါင်းကြီး၊ ကြောင်ထီးလေး "ငကြား" နဲ့ အမျိုးတော်ပါတယ်။ "အလတ်မ" နေထိုင်ရာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မောင်နှမများနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူး၊ သန်ချဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့မွေးစားချင်တယ်ဆို မိသားစုနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပက်ယူနတီ cb...